Uchris Froome | October 2021
Main > Uchris Froome
uvelaphi uChris froome
Uvelaphi uChris froome kusuka - imibuzo ejwayelekile
Wakhulela kuphi Chris Froome? UFroome wazalelwa eNairobi ngabazali baseBrithani ababuye bahlukanisa lapho ubaba wakhe efaka isicelo sokuqothuka. Yena nonina, owakhuthaza ukugibela kwakhe, bathuthela eNingizimu Afrika, lapho afundiswa khona futhi waqala ukuqeqeshwa eneminyaka eyi-12 nomgibeli wamabhayisikili waseKenya uDavid Kinjah.16.05.2021
iminyaka yamasonto onke ka-chris
Ubudala bechris bamasonto onke - sizixazulula kanjani
Ngabe uChris wamasonto onke unentombi? UChris noDatrie sebesondele isikhashana manje kade beya emaholidini, bechitha isikhathi esiningi, futhi besebenza ndawonye ukudala okuqukethwe. Kunamahlebezi okuthi lezi zithandani ziyajola, kepha azikakuqinisekisi ukuthandana.
chris froome ibhayisikili ama-specs
UChris froome bike specs - isixazululo se
Uhlobo luni lwebhayisikili olusetshenziswa uChris Froome? UFroome uzobe egibela ifreyimu entsha ye-OSTRO VAM yeFactor ngosayizi ongu-56cm. I-OSTRO VAM ingelinye lamabhayisikili emigwaqo enza konke okulula futhi engasindi, eklanyelwe ukulawula kuzo zonke izimo zomjaho.20.01.2021
chris uphondo doping
UChris horner doping - izixazululo eziqondiswe ezenzweni
Ngabe uChris Horner usebenzise ama-peds? UHorner akakaze ahlolelwe ukuthi une-HIV, futhi ukuphikile ukuthi wake wasebenzisa izidakamizwa ezikhuthaza ukusebenza, muva nje ngemuva kokuphumelela kwakhe eVuelta yamasonto amathathu kuphakamise izinsolo. Ngaphambi kwalokho uVuelta, wayengakaze abe yintandokazi yokuwina iGrand Tour.
uneminyaka emingaki uChris froome
Uneminyaka emingaki uChris froome - indlela yokuphatha
Ubiza malini uChris Froome? UChris Froome wenani elifanele: UChris Froome ungumgibeli wamabhayisikili wokugibela umgwaqo waseBrithani onenani elifanele lama- $ 12 million.
mude kanjani uChris froome
Mude kangakanani uChris froome - izimpendulo ezilula zemibuzo
Mude kangakanani umgibeli wamabhayisikili? Ucwaningo lwango-2017 olwenziwe yiPro Cycling Stats luthole ukuthi ukuphakama okujwayelekile komgibeli wamabhayisikili weWorldTour kwakungu-5'9. Ucwaningo luphinde lwathola ukuthi abagibeli, ngokwesilinganiso, babemfishane ngaphezu kwengxenye yamasentimitha kunabagijimi nokuthi ubude obuphakathi bezingcweti zomzila wesikhathi babuyisigamu se-intshi ngaphezu komunye umgibeli wamabhayisikili weWorldTour.